बढ्दो कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न सरकारले भर्खर सार्वजनिक गर्‍यो आफ्ना ८ महत्वपूर्ण निर्णय !! [सुचीसहित] – Sidha Online Post
मुख्य पृष्ठ /News/बढ्दो कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न सरकारले भर्खर सार्वजनिक गर्‍यो आफ्ना ८ महत्वपूर्ण निर्णय !! [सुचीसहित]
बिहीबार बेलुका बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरेको छ। सरकारले यसअघि सिसिएमसीको निर्णयअनुसार रोकिएको उद्धार तथा चार्टर पुन सुचारु गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले अबदेखी लागु हुनेगरी निजीको कोरोना उपचार खर्चसमेत भुक्तानी दिने भुक्तानी दिने भएको छ ।यसअघि सिसिएमसीले हचुवाका भरमा विदेशबाट उद्धार गरी नल्याउने निर्णय गर्दा उद्धारका लागि दुवई पुगेको विमान दुई सयभन्दा बढी नेपालीलाई विमानस्थलमै अलपत्र छाडेर फर्किएको थियो।
उक्त निर्णयको चौतर्फी आचोचनाभएपछि सरकारले सच्याएको ती मन्त्रिले बताए । एक मन्त्रिका अनुसार विदेशबाट आउने व्यक्तिले काठमाडौँमा आइसोलेसनका रुपमा होटलमा बस्नुपर्ने र त्यहाँ लाग्ने खर्च स्वयमले व्यहोर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। अस्पतालमा मात्र उपचार संभव नहुने भएपछि निजीमा भएको खर्चसमेत व्यहोर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको हो। बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले कोरोना भाइरसको उपचार निजी अस्पतालमा गर्दा लाग्ने खर्चसमेत व्यहोर्ने निर्णय गरेको छ।
संक्रमणको अवस्था भयाभह भएकाले सरकारी अस्पतालमा मात्र उपचार संभव नहुने भएपछि निजीमा भएको खर्चसमेत व्यहोर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको हो। सरकारले दशवटा स्थलमार्ग हुँर्द भारतबाट आउनेहरुले पनि कम्तिमा एक हप्ता सीमा आसपासमा आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले जिल्ला जिललामा निषेधाज्ञा जारी भएको अवस्थामा पनि उद्योग कलकारखानाका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ ओसार पसरमा अवरोध नगर्ने भएको छ।
त्यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत लगाइएको निषेधाज्ञाको पालन गराउन गृहमन्त्रालय मार्फत प्रहरीलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि सरकारले लिएको छ। स्थलगत नाकाबाट आउनेहरुले पनि क्वारेन्टिनमा अनिवार्य बस्नुपर्ने उनले बताए । उनीहरुले पनि आफ्नै खर्चमा सात दिन क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्नेछ। तर, पैसा तिर्न नसक्नेले भने सरकारले व्यवस्था गरेको ठाउँमा क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्नेछ। बैठकले अहिले जारी गरिएको निषेधाज्ञालाई थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ।
सीसीएमसीले देशब्यापी बन्दाबन्दी नगर्ने, तर अवस्था हेरेर स्थानीय प्रशासन मार्फत निषेधाज्ञा जारी गर्न सिफारिस गरेको थियो। राजधानी उपत्यकामा ६ देखि १० हजार आइसोलेसन बेड निर्माण गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ। निजी, सामुदायिक, सरकारी लगायत सबै अस्पतालमा आइसोलेसनको व्यवस्था गर्ने बैठकले निर्णय गरेको हो ।
सिसिएमसीका प्रवक्ता महेन्द्र गुरागाँईले आजको बैठकमा माघ ९ गते पहिलो कोरोना संक्रमण देखिएदेखि हालसम्म भएको संक्रमणको अवस्था, रोकथामका लागि चालिएका कदमहरुको बारेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ब्रिफिङ गरिएको जानकारी दिए । आजको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग दोहोरो छलफल नभएको र ब्रिफिङ ब्रिफिङ सुनिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले धन्यवाद दिएको उनले बताए । सिसिएमसीले भोलीदेखि उपत्यकामा गरिने निषेधाज्ञाको बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको छ ।